WARBIXIN: Liiska Tababarayasha Jagada Tababarenimo Ee Real Madrid Ku Loolami Doona Oo Kor U Kacay & Magacyo Cusub Oo Tartanka Ka Dhex Muuqda. - GOOL24.NET
October 21, 2018 Apdihakem Omer Adem
Liiska tababarayasha ku loolamaya jagada tababarenimo ee Real Madrid ayaa u muuqda kuwo kor u kac sameeyay waxaana uu haatan tartanka loogu jiro booska tababare Julen Lopetegui u muuqdaa mid ay ku hirdami doonaan macalimiin waaweyn.
Real Madrid ayaa halkeeda kasii wada bandhigyada aan wanaagsanayn ee kulamadii ugu dambeeyay waxaana ay shalay guuldaro kale kala kulmeen kooxda Levante oo marti u ahayd.
Haddaba, Waxaan warbixintan ku eegi doonaa liis ka kooban 10 tababare oo la filayo inuu midkood noqdo shaqsiga dhaxli doona kursiga haatan ee Lopetegui.
Conte ayaa ah murashaxa ugu cad cad uguna hadal haynta badan ee booskan, Qaabkii cajiibka ahaa ee uu kusoo maamulay kooxaha Chelsea iyo Juventus ayaa ah mid fure u noqon kara in tababaraha ree Talyaani uu xiiso ka helo Madrid.
Joachim Low ayaa ahaa mid markasta lala xidhiidhiyo Madrid markasta oo xaalad dhibaato ka dhacdo kooxda, Tababarahan ayaa haatan ku dhibaataysan xulka qaranka Germany kaddib bandhig xun oo ay kasoo sameeyen koobkii aduunka iyo qaabka aan wacnayn ee ay ku socdaan kulamada UEFA Nations League.
Low ayay suurogal tahay inuu iska casilo xilka tababarenimo ee xulkaas haddiiba uu xiiso ka helo Los Blancos waana dookh uu kaga badbaadi karo in si toos ah shaqada looga eryo.
Tababare Wenger ayaa sheegay inuu wakhtigiisii Arsenal diiday ku biirista Real Madrid sababtoo ah inuu Gunners daacad u ahaa, Wenger ayaa haatan hoggaan u noqon kara kooxdii uu taageeraha u ahaa wakhtigiisii carruurnimo.
Tababaraha ree Argentina ayaa xiiso joogto ah ka helayay kooxaha ugu waaweyn dunida kaddib markii uu koox xoogan ka dhigay Tottenham Hotspurs walow aysan kooxdu wax kharash ah oo badan ku bixin suuqa kala iibsiga.
Kharash la’aanta Spurs ee suuqa ayaa ah mid qalbi jab ku ridi karta Pochettino waana sababta ugu weyn ee madaxwene Florentino Perez ka caawin karta inuu ciyaartoygii hore ee Espanyol keeno Bernabeu.
Halkan kaga boggo magacyada kale ee dhaxli kara booska Julen Lopetegui.
Leonardo Jardim, Mikel Arteta, Guti, Hasenhutti, Fernando Hierro, Santiago Solari